बबल शूटर 🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र emulator.online बाट आनन्द लिनुहोस्
बुलबुला शूटर Android र iOS को लागी एक खेल हो जुन द्रुत सोच र सटीक लक्ष्यको आवश्यक छ। खेलको एक धेरै रंगीन लुक र एक धेरै साधारण गेमप्ले छ। हाम्रो सल्लाहहरू जाँच गर्नुहोस् र यो लत खेल खेल्न सिक्नुहोस्।
बबल शूटर कसरी खेल्ने ????
नि: शुल्क बबल शूटर अनलाइन खेल्नको लागि, तपाईंले भर्खरै गर्नु पर्छ यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
2 चरण। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईं मात्र गर्न छ हिट खेल र तपाईं कन्फिगरेसन छनौट गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ। एकचोटि तपाईंले खेल जित्नुभयो भने तपाईं स्तरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुल levels स्तरहरू छन्.
4 चरण। खेलमा सबै बुलबुले हटाउन को लागी प्राप्त गर्नुहोस्।
5 चरण। एउटा खेल समाप्त भएपछि, क्लिक गर्नुहोस् "फेरी सुरु" फेरि सुरु गर्न।
बबल शुटर के हो? 🤓
बबल शूटर मध्ये एक हो अन्तर्क्रियात्मक खेलहरू सब भन्दा प्रख्यात बबल शूटर, यसको खेल को सजिलो र धेरै सहज भएको कारण ज्ञात छ। तपाईं त्यो भन्न सक्नुहुन्छ यो मिश्रण हो दुई अन्य धेरै प्रसिद्ध खेलहरू जस्तै "tetris" र "चार जडान", जसले बबल शुटरलाई धेरै रमाइलो खेल बनाउँदछ।
उद्देश्य बबल शूटर एकदम सरल छ: सकेसम्म धेरै बिन्दुहरू स collect्कलन गर्नुहोस् रंगीन बुलबुले नष्ट गर्दै। बुलबुले नष्ट गर्नका लागि, कम्तिमा समान रंगको तीन बुबुले जडान गर्न आवश्यक छ।
को इतिहास बबल शूटर ????
यो रमाईलो र लोकप्रिय छ पजल खेल जुन हामीले सबै कुनै न कुनै समयमा खेलेका छौं। यद्यपि धेरैलाई थाहा छैन कि यसको जरा एक खेलमा छ जुन बाहिर आयो 80 को दशकमा जापानी आर्केड, र यो मूल रूपमा बुलबुले बबल भनिन्थ्यो। यो s ० को दशकसम्म थिएन जुन यो पश्चिममा पुगेको थियो, तर मूल खेलबाट केहि परिवर्तनहरू सहित।
बबल बबल यो १ 1986 XNUMX मा जापानी आर्केडमा जारी गरिएको थियो। यसमा, दुई साना ड्र्यागन, बुब र बब, एक गर्दै थिए साहसिक, को केहि तत्वहरूको साथ पजल र दुश्मनहरूका बिरूद्ध लडाईहरू प्रत्येक चरणमा विषयगत।
समय अनुसार ग्राफिकको साथ, र जापानी कार्टुनको सम्झना दिलाउँदछ, यो खेल्नु बजार मा भएको लागि बाहिर उभिए रमाईलो र लत, एक आर्केड को लागी केहि आवश्यक छ। यसबाहेक, को अवधारणा प्रयोग गर्न यो पहिलो खेलहरू मध्ये एक हो "बहु समाप्ति", केहि चीज जुन केवल अधिक आधुनिक खेलहरूमा लोकप्रिय हुन्छ। खेलाडीको प्रदर्शनमा निर्भरता, साहसको अन्त्य फरक हुन सक्छ
पहिले जस्तै, खेल जापानमा मात्र सफल भयो, 1994 मा, प्रोडक्शन कम्पनी टायटोले आफ्ना प्रसिद्ध पात्रहरूलाई बचाउने र नयाँ शीर्षकमा उनीहरूलाई रिलीज गर्ने निर्णय गर्यो। यो समय भनिन्छ पजल बुलबुले, र शुद्ध पहेली मेकानिकीको साथ। खेल तत्काल हिट थियो।
यो नयाँ संस्करणको साथ, तिनीहरू आफूले प्रयोग गरेको भन्दा केही फरक गर्न मद्दत गरे। तिनीहरूले हामीलाई प्रवेश गर्न शत्रुहरूसँग प्लेटफर्महरू पट्टि राखे अ score्कको लागि समान रंगको टुक्रा मिलाउने पहेली खेल। तर, टेट्रिसको विपरित, समयको अर्को हिट, टुक्राहरू तलबाट माथि आए, Bub र Bob द्वारा जारी गरिएको।
यदि तपाईं टुक्राहरूसँग स्क्रिन भर्नुहुन्छ भने तपाईंले एक खेल ओवर पाउनुहुनेछ। टुक्रिएका टुक्रा मध्ये, पानीका बुलबुलेहरू, सन्दर्भका लागि क्लासिक खेलका खलनायक थिए।
दुई खेलाडीहरू उनीहरु मिलेर सहकारितामा भाग लिन र अ points्क प्राप्त गर्न सक्दथे। बिचार दशकका पात्रहरूलाई नयाँ पुस्ता खेलाडीहरूको परिचय दिनका लागि विचार थियो, तर यस पटक नयाँ अनुहारको साथ। र यो काम गर्‍यो।
बबल शूटरको प्रकार ⭐
यस प्रसिद्ध खेलका 30० भन्दा बढी संस्करणहरू छन्, तर भिडियो कन्सोलहरूको लागि सिर्जना गरिएको सबैभन्दा प्रासंगिक संस्करणहरू:
अल्ट्रा बस्ट-ए-चाल र पहेली बबल लाइभ Xbox कन्सोलको लागि।
बस्ट-ए-चाल PSP को लागी डिलक्स।
बब्बल थ्रीडी पहेली निन्टेन्डो (थ्रीडीएस) को लागि।
पहेली बब्बल अनलाइन केवल पीसी को लागी।
पज्जल बबल डिज्नी (iOS)
बबल शूटर, free
उल्लेख गरिएका सबैमध्ये, कुनै श doubt्का बिना, बस्ट-ए-मूभको सबैभन्दा सफल क्लोन हो बबल शूटर
बबल शूटरसँग छ साधारण लुक एक सीधा प्रस्ताव संग। यस पटक खेल यस श्रृंखलाको क्लासिक तत्त्वहरू सम्मिलित गर्न त्यति चासो राख्दैन जुन यो द्वारा प्रेरित गरिएको थियो, तर बरु, यसलाई कायम राख्नको साथ। लत गेमप्ले जसले यसलाई लोकप्रिय बनायो।
खेलले एरको साथ गोलाहरू फाल्ने योजना बनाउँदछ, तिनीहरूको र colorsहरू र पोइन्ट मार्करसँग मिलाउन। ठूलो भिन्नता त्यो हो बबल शूटर नि: शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ब्राउजर वा मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा, जबकि यसको मूल खेल कन्सोल वा पीसीको लागि हो।
बबल शूटर नियमहरू 😍
तपाईको मुख्य लक्ष्य बबल शूटरमा यो छ सबै रंगीन बलहरू हटाउनुहोस् एक तोपको साथ स्क्रीन शूटिंग रंगीन बलबाट।
सम्झनु पर्छ तपाईंले गर्नै पर्छ समान रंगको कम्तिमा तीन बलहरू मिलाउनुहोस् जसले गर्दा यी सबै विस्फोट हुन्छन्, र यसरी सबै बलहरू मार्फत स्क्रिन समाप्त हुन्छ। को रंगहरु ब्यारेल बाहिर आउने बल अनियमित छन्, त्यसैले यो सजीलो जस्तो लाग्दैन।
यो गर्नका लागि तपाईले स्क्रीनलाई टच गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं तोपको साथ शूट गर्न चाहानुहुन्छ बलको र account्गलाई ध्यानमा राखी गोलको र color्ग लिन जुन यसको बराबर पत्ता लगाउनका लागि निकालिएको हुन्छ।
हाम्रो हुनुको साथै क्षमता बलहरू कहाँ राख्ने भनेर छनौट गर्दा यो हुनु पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ राम्रो उद्देश्य। गलत वा गलत दिशामा लक्ष्य राख्नु घातक परिणाम हुन सक्छ।
तपाईं होशियार हुनुहोस् किनकि यदि रंगीन बलहरूको पows्क्ति घाटीमा पुग्छ भने, तपाईं हराउनुहुन्छ खेल र तपाइँले फेरि सुरु गर्नु पर्छ।
यदि तपाईंसँग खेल समाप्त गर्न केही बलहरू बाँकी छ, वा बललको र colorsहरू जुन ब्यारेलबाट बाहिर आउँछ तपाईंलाई बलहरू हटाउन मद्दत गर्दैन, हामी तपाईंलाई यो देखाउनेछौं। truco.
रंगीन बलहरू राख्नुहोस् उदाहरण को लागी तपाईले पहिले नै स्क्रिनमा भएको उही र colorको एक (वा व्यक्ति) को बारे मा रूचि राख्नुहुन्न दुई बलमा गुलाब यी पहिलो बलहरू एक आधार को रूप मा कार्य गर्दछ निम्न मध्ये, र एकचोटि तपाईंले त्यो र get पाउनु भएपछि आवश्यक हुन्छ त्यो जग तोड्नुहोस्यसमा रहेका सबै बलहरू पनि हराउनेछन्।
यस तरिकाले तपाईं खेल विजयी रूपमा समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ र बललाई तोपमा पुग्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईं हार्नुहुन्छ।